Sida loo helo Si Tomorrowland By tareenka | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Sida loo helo Si Tomorrowland By tareenka
Haddii aad ka yaabban sida loo helo in Tomorrowland tareen, ka dibna eegto wax dheeraad ah. Jartaan tikidhka tareenka si aad u Tomorrowland ka hor nala! Haddii aad ku tahaye oo ka mid ah dadka nasiib u leedahay in tikidhada Tomorrowland sanadkan, Hubso inaadan uga tagin faahfaahinta safarka daqiiqada ugu dambeysa!
Marka waa Tomorrowland?
Ma noqon doonto dheer ilaa ay Dabaaldag ka furmay, si loo hubiyo in aynnu aad u diyaarshay Tomorrowland by tigidhada tareenka. Tomorrowland waxaa loo qaadan meel on laba fasaxa for 2018. Waa laba la soo dhaafay isbuucii bishii July: 20-22nd iyo 27-kii- 29th. Gathering, taas oo ah dhacdo pre-iid for jiifka iyo in Dreamville ah, qaadataa meel on 19-kii July, ka dibna 26-kii July, waayo todobaadkan 2.
Access Si Tomorrowland by tareenka:
Helitaanka iidda ayaa suuragal ah keliya haddii aad leedahay sax ah Tomorrowland jijin diiwaan on your name.
Brussels si kaca Tareenadu
Antwerp in ganacsigii Tareenadu
Liege in ganacsigii Tareenadu
Charleroi in ganacsigii Tareenadu
Jimcihii & Saturday, hubiyo-in u furan yahay ilaa 22h00. Access la diidi doonaa waqti ka dib.
On Sunday jeeg-in ay xirtey at 21h00. Access la diidi doonaa waqti ka dib.
Tomorrowland waa su'aal la'aan xafladda ugu fiican music dunida oo dhan. dalalka More yihiin Tomorrowland badan Olympics. Waa dhab ah a waayo-aragnimo u gaar ah iyo sida ugu fiican in ay dareemaan xiran. Sannad kasta waxa uu korayo xitaa ka weyn, sidaas darteed ma heli naxdin badnaa la by isagoo ku ceebownaaye, u hesho in ay Tomorrowland by tareenka.
Sida loo helo Si Tomorrowland By tareenka:
Tomorrowland ka dhici goobta xilliga firaaqada, de Schorre, in Boom. Magaalada Boom ku taalaa Belgium, dhexeeya Antwerp & Brussels. Magaalada Tani yar ekaysiiyaa goobta xisbiga a. Sida caadiga ah magaalada degan oo ay muujiyaan calamada Tomorrowland on daaqadaha ay wakhtiga iidda.
ugu muhiimsan ee ugu fiican Idaacadda si aad u hesho in ay Tomorrowland by tareenka waa in la helo si ay u Antwerp Dhexe. Marka aad halkan u joognaa aad ku socoto in ay rabto in aad hesho tareen kale in Boom.
Hel off xarunta Boom iyo qaadan Slaam bas oo lacag la'aan ah si ay u Tomorrowland / DreamVille. Ka dib markii maalin kasta iidda, saddex dheeraad ah tareenada habeenkii ordi doonaa in Central Station Antwerp.
CUSUB: maalmaha, waxaa hadda jira 2 tareenada saacaddii u dhexeeya Antwerp-Bartamaha iyo Boom. On Sabti iyo Axad: 1 tareen saacaddiiba.
Rotterdam si kaca Tareenadu
Paris si ay u kaca Tareenadu
Maastricht in ganacsigii Tareenadu
Amsterdam in ganacsigii Tareenadu
Waa Maxay Tomorrowland Like?
Hadda oo aan idin siiyey faahfaahinta qaadhaan on Tomorrowland by tareenka, waxa la joogaa wakhtigii loogu talagalay qayb ka mid xiiso leh! Haddii ay markii kuugu horeysabaa socday Tomorrowland, aad u badan tahay yaabban waxa ay noqon doontaa sida. Tomorrowland waa xaqiiqo ah oo qiimihiisu Crore ah in la abuuray oo ku wareegsan. Tomorrowland ayaa loogu codeeyay weyn iidda diidanayn music EDM ee adduun ee muddo dhowr sano ordaya. Booqashada ugu yaraan hal mar in ka mid ah uu nool yahay waxa uu noqday waajib ah taageere music kasta, xisbiga goer ama enthusiast iidda. Tomorrowland 2018 waxaa ay kor u qaabeynta in ay ugu weyn taariikhda iid ee. Waxay leedahay tiro dhab ah lama ilaawaan ah fanaaniinta aduunka fantastic dhigay oo ay iftiinka ugu soo 16 marxaladaha cajiib ah.
Ka sokow isagoo line cajiib ah, qaabiyaasha u muuqdaan in ay ku fikiray wax kasta, oo ay ku jiraan lookarrada Ijaarto, meelaha u haysta in aad telefoon iyo xataa lacag u gaar ah lagu magacaabo Jawhar. Waxaad haysataa fursado kala duwan to top-up aad jijin la Jawhar: Waxaad ku dari kartaa Jawhar online at aad Account Tomorrowland, at tab ah 'My jijin’ ka hor inta iidda credit card aad (VISA, Mastercard), Bancontact, Sofortüberweisung ama ku haboon. Tani dhab ahaantii uu noqdo meel aad ka bixi kartaa oo dhan welwelka aad ka dambeeya!
Waxaan ku talinaynaa in aad raacdo Tomorrowland on Facebook si aad u hesho updates on the line iyo iidda guud, iyo sidoo kale kuu raaci kari waayay Save A Tareen Twitter
Waayo, wax kasta oo tigidhada tareenka Yurub, iyo gaar ahaan Tomorrowland by tareenka oo dhan ka Europe, kaliya gala website Save A Tareen oo wuxuu ku raaxaysan Waxaad faraskaaga ku fuushaa tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftomorrowland-by-train%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / NL in ay / de ama / iyo luuqado badan.